Akụkọ - Ihe dị iche n’etiti ndị na-eswe ihe na ndị na-esiri infrared
Thekpụrụ ọrụ nke onye na-esi nri infrared: mgbe ọ kpoo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ (nickel-Chromium metal kpo oku), ọ na-etolite arụmọrụ dị elu na nso infrared ray. Site na arụmọrụ nke mpempe akwụkwọ microcrystalline, a na-emepụta ray ray infrared dị elu dị irè. Ahịrị ọkụ ahụ kwụ ọtọ, a na-agbasasịkwa ọkụ ọkụ na ala nke ite ahụ, ka e wee nweta mmetụta kpo oku. A na-etinye waya na-eguzogide ya n'ime waya ma gbanwee uhie, na-emepụta okpomọkụ. A na-enye ọkụ ahụ ite iji nweta mmetụta nke ikpo ọkụ.
Workingkpụrụ ọrụ nke onye na-agba ihe ọkụkụ: a na-eji ụzọ ọzọ dị ugbu a iji mepụta oghere magnetik na-agbanwe agbanwe mgbe niile site na eriri igwe. Eddy current ga-apụta n'ime onye na - eduzi ya na magnetik magnetik ọzọ. Mmetụta okpomọkụ nke Joule nke eddy ugbu a ga-eme ka onye na-eduzi ya kpoo ọkụ, ka ọ wee nwee ike ịmata kpo oku.
Ihe dị iche: Ọ dabara na ite ahụ.
Infrared cooker na-enyefe okpomọkụ ozugbo na ite ahụ, ya mere enwere ike iji ite dị iche iche mee ite ahụ, ọ bụghị ite, enwere ike iji ite ọ bụla mee ihe.
Ihe eji esi nri bụ ite dị na ndọba nke electromagnetic n'okpuru kpo oku, ọ bụrụ na ite na ihe a enweghị ike ịnakwere ọrụ nke ndọta, mgbe ahụ kpo oku apụtaghị na ajụjụ a, yabụ onye na-esi nri nwere mmachi, enwere ike iji ite magnet, ite.
Ihe dị iche 2: Hegba ọkụ ọkụ.
Infrared cooker na-ekpo ọkụ nwayọ nwayọ n'ihi na ọ na-ekpo ọkụ ihe ọkụ ọkụ, nke a na-atụgharị ya na ite ahụ.
Onye na-etinye ihe na-ekpo ọkụ na-amalite mgbe ọ na-emepụta electromagnetic, ite magnet ga-azụlite okpomọkụ, yabụ ọsọ dị ngwa ngwa karịa ọkụ eletrik seramiiki.
Yabụ na iji usoro a eme ihe, ite ihe na-ahọpụtakarị ịhọrọ onye na-eme ihe ọkụkụ, n'ihi na kpo oku dị ngwa ngwa.
Ihe dị iche 3: mmetụta okpomọkụ mgbe niile.
Igwe ọkụ seramiiki eletrik nwere ọrụ ịchịkwa okpomọkụ, nke ga-ebelata ike mgbe ọ ruru ụfọdụ okpomọkụ, ya mere mmetụta okpomọkụ na-adịgide adịgide ka mma.
Igwe oku na-agba ume bụ kpo oku na-adịghị akwụsị akwụsị, dị oke ọkụ, dị nso, na-aga n'ihu na-ekpo ọkụ, yabụ nsonaazụ nke okpomọkụ mgbe niile adịghị mma.
Ya mere, mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ na-ahọrọ ite ọkụ eletrik ka mma.